အသင်းခေါင်းဆောင်သစ် မက်ဆီအတွက် စောင့်ကြိုနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းများ
ဘာစီလိုနာအသင်း ခေါင်းဆောင်သစ် မက်ဆီ Messi အတွက် စောင့်ကြိုနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းများ
11 Aug 2018 . 6:55 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်မှာ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား အင်နီယေစတာ Iniesta ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက် လစ်လပ်သွားတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်နေရာမှာ နည်းပြဗယ်လ်ဗာဒီ Valverde က မက်ဆီ Messi နဲ့ အစားထိုးခဲ့တယ်။ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ်ကတည်းက ဘာစီလိုနာစီနီယာအသင်းအတွက် စတင်ကစားခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာကစားသမားဘ၀ (၁၄)ရာသီအတွင်း တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုတွေရော၊ အသင်းလိုက် အောင်မြင်မှုတွေပါ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးနဲ့ ထိုက်တန်သူဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ဘူး။
ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် (၅၅၂)ဂိုးသွင်းထားပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမား၊ လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား စတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေ ရယူထားသူ မက်ဆီ အတွက် ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီသစ်မှာ နောက်ထပ်ရယူဖို့ရှိနေတဲ့ စံချိန်သစ်တွေကလည်း အသင့်စောင့်ကြိုနေပါပြီ။ မက်ဆီရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာ နောက်ထပ်ရေးထိုးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကတော့ . .
လာလီဂါမှာ ဟက်ထရစ်အများဆုံး သွင်းယူမယ့်သူ
လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက် ဟက်ထရစ်အများဆုံးသွင်းယူခဲ့သူ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဂျူင်ေတပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အတွက် မက်ဆီဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့နေရာကို ရယူဖို့ အခြေအနေကောင်းသွားပါပြီ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း လာလီဂါမှာ ဟက်ထရစ် (၃၄)ကြိမ်အထိ သွင်းယူခဲ့ပြီး မက်ဆီက အကြိမ်(၃၀)သွင်းယူထားတယ်။ မက်ဆီလို Gifted Player တစ်ဦးအတွက် ဟက်ထရစ်သွင်းဖို့ဆိုတာက အခက်အခဲမရှိတာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိနေပြီး သူ့ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်လို့လည်း ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
ပီချီချီဆုကို (၆)ကြိမ်မြောက် ရယူနိုင်မယ့်သူ
လာလီဂါ သွင်းဂိုးအများဆုံးဆု(ပီချီချီ)ကို အကြိမ်အများဆုံးရယူခဲ့သူက ဘီလ်ဘာအို ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးကြီး တယ်လ်မိုဇာရာ Telmo Zarra ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီက ပီချီချီဆုကို (၅)ကြိမ်ရယူခဲ့ပြီး လာလီဂါရဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေဖြစ်တဲ့ ဒီစတီဖာနို Di Stéfano ၊ ကွီနီ Quini ၊ ဟူဂိုဆန်းချက်ဇ် Hugo Sánchez တို့နဲ့အတူ ဒုတိယနေရာမှာ ပူးတွဲရပ်တည်နေတယ်။ မက်ဆီဟာ ပီချီချီဆုကို နောက်ဆုံး(၂)ရာသီဆက် ရယူခဲ့တဲ့အပြင် အဓိက ပြိုင်ဘက် စီရော်နယ်လ်ဒိုလည်း မရှိတော့တဲ့အတွက် (၃)နှစ်ဆက် ရယူဖို့က အခက်အခဲမရှိနိုင်တာကြောင့် လာလီဂါသမိုင်းဝင်စံချိန်တစ်ခုကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပါပြီ။
ပရိသတ်ကြီးရေ . . ဒါတွေကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင်သစ် မက်ဆီ ရာသီသစ်မှာ ရယူဖို့ရှိနေတဲ့ စံချိန်တွေပါပဲ။ လာလီဂါသမိုင်းဝင်မယ့် မှတ်တမ်းတွေကို မက်ဆီ ဆက်လက် ရယူနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo: squawka,Barca Blaugranes,Eurosports,
ဘာစီလိုနာအသငျး ခေါငျးဆောငျသဈ မကျဆီ Messi အတှကျ စောငျ့ကွိုနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးမြား
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကုနျမှာ ဂန်ထဝငျကစားသမား အငျနီယစေတာ Iniesta ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ လဈလပျသှားတဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျနရောမှာ နညျးပွဗယျလျဗာဒီ Valverde က မကျဆီ Messi နဲ့ အစားထိုးခဲ့တယျ။ အသကျ(၁၇)နှဈအရှယျကတညျးက ဘာစီလိုနာစီနီယာအသငျးအတှကျ စတငျကစားခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာကစားသမားဘ၀ (၁၄)ရာသီအတှငျး တဈဦးခငျြးအောငျမွငျမှုတှရေော၊ အသငျးလိုကျ အောငျမွငျမှုတှပေါ ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ မကျဆီဟာ အသငျးခေါငျးဆောငျရာထူးနဲ့ ထိုကျတနျသူဆိုတာ ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျဘူး။
ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ (၅၅၂)ဂိုးသှငျးထားပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမား၊ လာလီဂါပွိုငျပှဲရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား စတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှေ ရယူထားသူ မကျဆီ အတှကျ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီသဈမှာ နောကျထပျရယူဖို့ရှိနတေဲ့ စံခြိနျသဈတှကေလညျး အသငျ့စောငျ့ကွိုနပေါပွီ။ မကျဆီရဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးစာအုပျထဲမှာ နောကျထပျရေးထိုးဖို့ ကနျြနသေေးတဲ့ မှတျတမျးတှကေတော့ . .
လာလီဂါမှာ ဟကျထရဈအမြားဆုံး သှငျးယူမယျ့သူ
လာလီဂါသမိုငျးတဈလြှောကျ ဟကျထရဈအမြားဆုံးသှငျးယူခဲ့သူ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဂြူငျေတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့အတှကျ မကျဆီဟာ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့နရောကို ရယူဖို့ အခွအေနကေောငျးသှားပါပွီ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး လာလီဂါမှာ ဟကျထရဈ (၃၄)ကွိမျအထိ သှငျးယူခဲ့ပွီး မကျဆီက အကွိမျ(၃၀)သှငျးယူထားတယျ။ မကျဆီလို Gifted Player တဈဦးအတှကျ ဟကျထရဈသှငျးဖို့ဆိုတာက အခကျအခဲမရှိတာကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျကို ခြိုးဖွတျနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးရှိနပွေီး သူ့ရဲ့ အဓိက ပွိုငျဘကျ စီရျောနယျလျဒိုကို ကြျောဖွတျနိုငျမှာဖွဈလို့လညျး ဂုဏျယူစရာကောငျးတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတဈခုဖွဈလာမှာပါ။
ပီခြီခြီဆုကို (၆)ကွိမျမွောကျ ရယူနိုငျမယျ့သူ
လာလီဂါ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဆု(ပီခြီခြီ)ကို အကွိမျအမြားဆုံးရယူခဲ့သူက ဘီလျဘာအို ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီး တယျလျမိုဇာရာ Telmo Zarra ဖွဈပါတယျ။ မကျဆီက ပီခြီခြီဆုကို (၅)ကွိမျရယူခဲ့ပွီး လာလီဂါရဲ့ ဂန်ထဝငျတှဖွေဈတဲ့ ဒီစတီဖာနို Di Stéfano ၊ ကှီနီ Quini ၊ ဟူဂိုဆနျးခကျြဇျ Hugo Sánchez တို့နဲ့အတူ ဒုတိယနရောမှာ ပူးတှဲရပျတညျနတေယျ။ မကျဆီဟာ ပီခြီခြီဆုကို နောကျဆုံး(၂)ရာသီဆကျ ရယူခဲ့တဲ့အပွငျ အဓိက ပွိုငျဘကျ စီရျောနယျလျဒိုလညျး မရှိတော့တဲ့အတှကျ (၃)နှဈဆကျ ရယူဖို့က အခကျအခဲမရှိနိုငျတာကွောငျ့ လာလီဂါသမိုငျးဝငျစံခြိနျတဈခုကို အမီလိုကျနိုငျဖို့ နီးစပျနပေါပွီ။
ပရိသတျကွီးရေ . . ဒါတှကေတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးခေါငျးဆောငျသဈ မကျဆီ ရာသီသဈမှာ ရယူဖို့ရှိနတေဲ့ စံခြိနျတှပေါပဲ။ လာလီဂါသမိုငျးဝငျမယျ့ မှတျတမျးတှကေို မကျဆီ ဆကျလကျ ရယူနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . .